Walaalo si khaldan u xirnaa 24 sano oo magdhaw la siiyay | Dhaymoole News
Walaalo si khaldan u xirnaa 24 sano oo magdhaw la siiyay
Laban nin oo walaalo ah, muddo 24 sano ahna magaalada Baltmore e dalka Mareykanka ugu xirnaa dil aysan geysanin ayaa gobolka ay ku nool yihiin waxaa ay ka heleen lacag magdhaw ah oo gaareysa 1.9 milyan oo doollar.
Eric Simmons iyo Kenneth ayaa xabsiga laga sii daayay bishii May ee sanadkii hore, kadib markii dacwad oogaha gobolkaas uu dib u eegis ku sameeyay dembiga loo heystay, waxaana uu yaqiinsaday in dembiga lagu xukumay uu ahaa khalad ka dhashay baaritaankii la sameeyay.
Tallaabadan lagu sii daayay raggan walaalaha ah ayaa timid xilli dalka Mareykanka ay ka taagan tahay dood ku saabsan hab dhaqanka booliska iyo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa booliska iyo hannaanka cadaaladda ee Mareykanka.
Nimankan walaala ah ee madowga ah ayaa dib ka helay caddeymo muujinaya in aysan ka dambeynin dilkii dhacay 1994, waxaana xilligaas ay da’doodu ahayd 20 sano jir.
Mashruuc lagu gargaaro dadka loo xukumo dembiyada aysan gelin ayaa kusoo warramay in booliska ay cadaadis saareen wiil 13 sano jir ah si uu u aqoonsado Mr Simmons iyo Mr McPherson, waxaana ay sheegeen in booliska ay wiilkaas ugu hanjabeen in lagu soo oogi doona dacwad dil ah haddii uu diido in uu ku marqaati kaco.
Marqaati kale oo basaas u ahaa booliska, lacagna ay siin jireen ayaa sheegay in uu arkay xilligii uu dilka dhacayay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Baltimore ayaa caddeeyay in raggan aysan ku lug lahayn dilka, mid kamid ah ragganna na uu hurdayay xilliga uu falka dhacayay.